FES – Fampandrosoana: mila politika mampifamotitra ny fambolena sy ny indostria | NewsMada
FES – Fampandrosoana: mila politika mampifamotitra ny fambolena sy ny indostria
Par Taratra sur 31/10/2020
Nanaovan’ny Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) fanadihadiana manokana ny tontolon’ny indostria eto Madagasikara. Ny fifandraisan’ny sehatry ny fambolena sy ny indostria. Mila politika mazava ny fifandraisan’ny roa tonta.
Momba ny politikan’ny indostria, tsy hita taratra loatra ny fifandraisan’ny seha-pihariana momba ny fambolena sy ny fambolena, amin’ny seha-pihariana momba ny indostria. Amin’ny ankapobeny, 15 % amin’ny harinkarena faobe ny entin’ireo seha-pihariana roa mitambatra ireo tato anatin’ny 10 taona farany. Tanjona avy ammin’ny fanadihadiana nataon’ny FES ny hampiakatra izany ho 25 % amin’ny harinkarena faobe amin’ny taona manaraka. Mila politikan’ny indostria mafy orina anefa izany.
Hita tamin’ny fanadihadiana, mifanohitra tanteraka amin’ny akora fototra misy eto an-toerana ny fanafarana entana voahodina avy any ivelany, toy ny menaka, ny siramamy, ny savony, ny vokatra ronono, sns. Akora fototra avy amin’ny fambolena sy ny fiompiana ireo rehetra ireo. Maro anisa rahateo ny Malagasy miasa amin’izany, hatrany amin’ny 8 tapitrisa ha ny tany azo volena. Manambara izany fa karazany tsy misy na tsy ampy ny fifandraisana eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny indostria.
Tsy ahitana fiantraikany amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny seha-pihariana iray mandeha irery. Ny indostria, tsy maintsy miankina amin’ny famatsiana ny vokatra avy amin’ny fambolena sy fiompiana; ary miankina amin’ny fisian’ny indostria ny lalam-barotra manjifa ny vokatra avy any ambanivohitra.
Navoitra tamin’ny fanadihadiana ny fifandraisana eo amin’ny sehatra roa tonta, nofaritana, nahoana ny indostria no mifamatotra amin’ny fambolena sy fiompiana? Azo alain-tahaka ny fandaharanasa momba ny indostria amin’ny firenena sasany aty Afrika. Jerena ny efa misy eto an-toerana; ary volavolaina ny politika tokony hanatanterahana izany mazava.